ပုရိသ ယောင်ျကြားထုကွီး သတိပေးစကားပွောလာတဲ့ မျောဒယျခငျရူပ – MC Tv Club
ပုရိသ ယောင်ျကြားထုကွီး သတိပေးစကားပွောလာတဲ့ မျောဒယျခငျရူပ
သရုပျဆောငျနဲ့ မျောဒယျလျ ခငျရူပကတော့ အသကျ (၁၄) နှဈအရှယျကတညျးက အလှမယျပွိုငျပှဲတှမှော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့သူဖွဈပွီး Miss Tourism Beauty Pageant 2011 ပွိုငျပှဲကွီးမှာ Winner တဈယောကျအဖွဈ လူသိမြားကြျောကွားခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
ခငျရူပက အိမျထောငျကပြွီးနောကျပိုငျး အနုပညာ အ လုပျတှကေို ရပျနားလိုကျပွီး သူမရဲ့ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးအလုပျနဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူရဲ့ အလုပျတှကေို ကူညီလုပျ ကိုငျရငျး တညျငွိမျတဲ့ဘဝတဈခုကို ဖွတျသနျးနတောပဲဖွဈပါတယျ။
အိမျထောငျသညျအမြိုးသမီးဖွဈတဲ့ ခငျရူပဟာ ဒီကနမှေ့ာတော့ သူမနဲ့ခငျမငျရငျးနှီးတာကို အခှငျ့ကောငျးယူပွီး ထိကပါးရိကပါးမပွုလုပျဖို့ သတိပေးလာခဲ့ပါတယျ။ခငျရူပက “တခြိူ့ အမြိုးသားမြားရှငျ ကမြခငျတတျပါတယျ မရိုငျးတတျပါဘူး ဒါမယျ့နှုတျဆကျရငျ ထိကပါးရိကပါးကိုငျတာတှေ ပှတျတာတှေ လုံးဝ အဆငျပွမေနပေါဘူးနျော။
ကမြဘယျလိုဘဲဝတျဝတျရှငျတို့ ထိခှငျ့မရှိပါဘူးနျော! ဒါကမြလှတျလပျခှငျ့ပါ။ ဖကျတာလညျးမကွိုကျပါဘူး ဒီတိုငျးခငျမငျရငျးနှီးစှာမဖကျမထိဘဲ နှုတျဆကျပါစိတျအရမျးအခနျ့မသငျ့လာရငျ ဆှဲထိုးပါမယျနျော။ဆိုရှယျကမြနဘေူးနျော သိဖို့က ကိုယျလညျး သူမြားလငျဆို အရမျးဆငျခွငျတယျ ဘယျလောကျခငျခငျ သတိအ ရမျးထားတယျ။
ပွီးတော့အိုကွီးအိုမခြောလှလညျးမနကွေဘူး သူငယျအဆငျအတောငျ့အဖွောငျ့ဆိုလညျး ဟုတျသေး” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ခငျရူပကတော့ သူမကိုယျတိုငျလညျး သားမ ယားရှိတဲ့ အမြိုးသားတှနေဲ့ ခငျမငျရငျလညျး ဆငျခွငျသလို သူမအပျေါကိုလညျး လေးစားမှုရှိဖို့ ပွောလာတာပဲဖွဈပါတယျ။
ပုရိသ ယောင်္ကျားထုကြီး သတိပေးစကားပြောလာတဲ့ မော်ဒယ်ခင်ရူပ
သရုပ်ဆောင်နဲ့ မော်ဒယ်လ် ခင်ရူပကတော့ အသက် (၁၄) နှစ်အရွယ်ကတည်းက အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး Miss Tourism Beauty Pageant 2011 ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ Winner တစ်ယောက်အဖြစ် လူသိများကျော်ကြားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ရူပက အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်း အနုပညာ အ လုပ်တွေကို ရပ်နားလိုက်ပြီး သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအလုပ်နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ အလုပ်တွေကို ကူညီလုပ် ကိုင်ရင်း တည်ငြိမ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ ခင်ရူပဟာ ဒီကနေ့မှာတော့ သူမနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ထိကပါးရိကပါးမပြုလုပ်ဖို့ သတိပေးလာခဲ့ပါတယ်။ခင်ရူပက “တချိူ့ အမျိုးသားများရှင် ကျမခင်တတ်ပါတယ် မရိုင်းတတ်ပါဘူး ဒါမယ့်နှုတ်ဆက်ရင် ထိကပါးရိကပါးကိုင်တာတွေ ပွတ်တာတွေ လုံးဝ အဆင်ပြေမနေပါဘူးနော်။
ကျမဘယ်လိုဘဲဝတ်ဝတ်ရှင်တို့ ထိခွင့်မရှိပါဘူးနော်! ဒါကျမလွတ်လပ်ခွင့်ပါ။ ဖက်တာလည်းမကြိုက်ပါဘူး ဒီတိုင်းခင်မင်ရင်းနှီးစွာမဖက်မထိဘဲ နှုတ်ဆက်ပါစိတ်အရမ်းအခန့်မသင့်လာရင် ဆွဲထိုးပါမယ်နော်။ဆိုရှယ်ကျမနေဘူးနော် သိဖို့က ကိုယ်လည်း သူများလင်ဆို အရမ်းဆင်ခြင်တယ် ဘယ်လောက်ခင်ခင် သတိအ ရမ်းထားတယ်။
ပြီးတော့အိုကြီးအိုမချောလှလည်းမနေကြဘူး သူငယ်အဆင်အတောင့်အဖြောင့်ဆိုလည်း ဟုတ်သေး” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ရူပကတော့ သူမကိုယ်တိုင်လည်း သားမ ယားရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေနဲ့ ခင်မင်ရင်လည်း ဆင်ခြင်သလို သူမအပေါ်ကိုလည်း လေးစားမှုရှိဖို့ ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article သမီးလေးကို စင်ျကာပူကို အလညျပို့နတေဲ့ ဖဖေစေညျဖွိူးနဲ့ မမေေ ခငျလှမျး
Next Article ကိုကြျော မိသားစုနဲ့ အတူ ခရီးတှေ ထှကျနတေဲ့ ဆုမွတျနိုးဦး